Umthelela we-Antarctica kwisimo sezulu seplanethi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu
Umthelela we-Antarctica kwisimo sezulu seplanethi
IsiJalimane Portillo | | Isimo Sezulu
I-Antarctica iyizwekazi elineqhwa lomhlaba wethu futhi ineqhaza elikhulu ekulawuleni isimo sezulu emhlabeni. Iyakwazi ukuthonya amazinga okushisa awo wonke amagumbi omhlaba futhi isisize silwe nokuguquka kwesimo sezulu.
Kodwa-ke, njengoba amazinga okushisa omhlaba ekhuphuka kakhulu, amandla nobukhulu be-Antarctica buyacekelwa phansi. I-Antarctica iyithonya kanjani imvelo emhlabeni jikelele?
1 Amathonya we-Antarctica ehlane lase-Atacama
2 Ukuxhumana phakathi kwezilwandle
3 Ithonya le-Antarctica esimweni sezulu
Amathonya we-Antarctica ehlane lase-Atacama
Kuyacaca ukuthi ithonya le-Antarctica ezingeni lomhlaba libaluleke kakhulu ukuthi kwenzekani kulo izonquma ngesimo sezulu sezinye izingxenye zomhlaba, kufaka phakathi lezo ezikude kakhulu naleli zwekazi. Isibonelo, lolu dedangendlale lweqhwa luthonya ukuba khona kogwadule lwase-Atacama nokucaca kwamazulu alo. Lezi zibhakabhaka zibhekwa njengezinhle kakhulu emhlabeni ukukwazi ukubuka isibhakabhaka.
Kepha i-Antarctica ihlangana ngani nokuba khona kwalelihlane? Esinye sezici ezenza leli hlane lome kakhulu emhlabeni yingenxa yethonya i-Antarctica elinalo umsinga wolwandle okhuphuka ogwini lwaseChile. Lesi sikhathi samanje sipholisa amanzi futhi sinciphise izinqubo zokuhwamuka, okunciphisa imvula nesembozo samafu endaweni.
Ukuxhumana phakathi kwezilwandle
I-Antarctica nayo inomthelela ekuxhumaneni phakathi kwezilwandle. Ukuze sikwazi ukuyichaza ngendlela elula, kungashiwo ukuthi lapho amanzi ahlanzekile eqhwa encibilika (okungamanzi amancane kunamanzi anosawoti) futhi ahlangana nemisinga yolwandle kushintsha usawoti wawo, okuthonya ukuxhumana phakathi ubuso bolwandle nomkhathi.
Ngoba zonke izilwandle zomhlaba zixhunyiwe (empeleni kungamanzi nje, sikubiza ngamagama ahlukile), noma yini eyenzekayo e-Antarctica ingaveza izenzeko ezifana nesomiso esikhulu, izimvula ezinkulu, njll. Noma ikuphi emhlabeni. Ungasho ukuthi kufana nomphumela wovemvane.
Ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu nokushisa komhlaba, amazinga okushisa ayanda emhlabeni jikelele. E-Antarctica, ngoMashi 2015, kufinyelele emazingeni okushisa angama-17,5 degrees. Leli yizinga lokushisa eliphakeme kakhulu elirekhodiwe kule ndawo ngoba kunamarekhodi e-Antarctica. Cabanga inani leqhwa okufanele licibilike futhi linyamalale kula mazinga okushisa.
Nokho, ezinsukwini ezine kamuva, ugwadule lwase-Atacama lwacwila emahoreni angama-24 inani elifanayo lemvula elana eminyakeni eyi-14 edlule. Ukuncibilika kweqhwa lase-Antarctic kwadala ukufudumala emanzini aseduze nogwadule, okwenyusa izenzakalo zokuhwamuka futhi kwabangela amafu e-cumulonimbus. Isimo esingajwayelekile sesimo sezulu sikhiphe uchungechunge lwezikhukhula ezahamba sebengu-31 abashonile kwathi abangu-49 badukile.
Ithonya le-Antarctica esimweni sezulu
Ukusakazeka okubandayo kwezilwandle, okwenziwe ezindaweni zase-Arctic nasengxenyeni esentshonalanga ye-Antarctica, kwenza izwekazi elimhlophe libe "ngumlawuli wesimo sezulu samaplanethi". Ngenxa yokuthi iKorea inamazinga okushisa afudumele nobusika obubandayo, kuyadingeka ukuthi kuphenywe ngokwenzeka e-Antarctica ukuqonda ukubaluleka nezimpawu zalezi zinto.
Okunye okukhathaza ososayensi ukuthi, ngenxa yokwanda okuqhubekayo kwamazinga okushisa omhlaba, ishelufu elikhulu leqhwa laseLarsen C lisengozini yokuvaleka. cishe amakhilomitha-skwele angama-6.000 angahle aqhume futhi abangele izehlakalo ezimbi emhlabeni jikelele. Emashumini amathathu edlule, izingxenye ezimbili ezinkulu zeshelufu elibandayo, elibizwa ngeLarsen A neLarsen B, sezivele zawa, yingakho ingozi isiseduze.
Ngeshwa, iqiniso lokuthi lolu hlobo lomkhuba luyaqhubeka ukwenzeka ngeke lisagwenywa. Noma ngabe ukukhishwa komhlaba kuncishiswa ngokushesha, amazinga okushisa angaqhubeka nokukhuphuka iminyaka embalwa, anele ukuthi uLarsen C agcine echithile. Umhlaba yikhaya lethu, ukuphela kwaso esinaso. Kumele simnakekele kungakephuzi kakhulu
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Umthelela we-Antarctica kwisimo sezulu seplanethi
I-NOAA ithola izithombe zombani zokuqala ezivela kusathelayithi i-GOES-16
Ukuguquka kwesimo sezulu kusongela uphayini omnyama eTeruel
Thola zonke izindaba mayelana nesimo sezulu ku-imeyili yakho.